BigCommerce na-ewepụta Gburugburu 67 E-commerce ọhụrụ | Martech Zone
BigCommerce mara ọkwa 67 ọhụụ mara mma ma na-anabata nke ọma iji nyere ndị ahịa aka igosipụta ike nke ụdị ha ma bulie azụmaahịa ha. N'iji ikike ahia ahia nke oge a na ntanetị dị ọcha, nke na-enweghị nghọta, ndị na-ere ahịa ga-enwe ike ịhọrọ isiokwu e-commerce kachasị maka nhapụta katalọgụ dị iche iche, ngwa ahịa na nkwalite iji mepụta ahụmịhe ahịa na-enweghị ntụpọ maka ndị ahịa ha n'ofe ngwaọrụ ọ bụla.
Isi ihe na-aga nke ọma na ahịa azụmaahịa taa bụ ire ọ bụghị naanị ngwaahịa, kamakwa ahụmịhe niile nke onye ahịa ahụ. Site na isiokwu ọhụrụ anyị, yana usoro mmepe ọhụụ nke na-enye ha ike, ndị ahịa anyị ga-enwe mmetụta dị ịtụnanya na ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị taa ma na-ere n'ahịa karịa nke ha ga-enweta na ntanetị ọzọ n'ụwa. Tim Schulz, Onye isi ahịa ndị isi na BigCommerce.
Ewubere site na ngwa ahia na ngwa ngosi ihe eji eme ihe dika ntọala, a na-echekwa isiokwu ndị ọhụrụ maka ọtụtụ katalọgụ ngwaahịa, ụlọ ọrụ na nkwalite. Site na ịhọrọ otu isiokwu ọhụrụ, ndị na-ere ahịa nwere ọtụtụ atụmatụ, gụnyere:
Atụmatụ kachasị maka ndị ahịa mkpanaka - Ewubere maka azụmaahịa dị njikere ire karịa gafee ngwaọrụ niile, isiokwu ọhụụ jikọtara ọganiru ọhụụ ọhụụ iji hụ na echekwara ụlọ ahịa ahụ nke ọma maka ndị na-azụ ahịa n'agbanyeghị ụdị ngwaọrụ ha na-agagharị ma ọ bụ zụta.
Enweghị nkebi na Mfe Customiziz - Ndị na-ere ahịa ga-enwe ike ịhazi ọdịdị na mmetụta nke ụlọ ahịa ha na oge, gụnyere font na palettes agba, akara ngosi, agba na mkpokọta na-ere ere, akara ngosi mgbasa ozi mmekọrịta na ihe ndị ọzọ.
Ejiri Ọrụ Nchọpụta Emebere - Nchọpụta etinyere na-eme ka ahụmịhe ndị ahịa meziwanye site na ikwe ka ndị ahịa nyocha, chọpụta ma zụta ngwaahịa ngwa ngwa, si otú ahụ na-eme ka ntughari kwalite site na 10%.
Kachasị Otu peeji na-ndenye ọpụpụ - Site na ịkọwa mpaghara niile n'otu ibe weebụ na-anabata, ndị ahịa nwere ike mezue nzụta; ndị na-ere ahịa achọpụtala na mmụba 12% na ntụgharị site na ahụmịhe ọhụụ ọhụụ.
A na-enweta isiokwu ọhụrụ BigCommerce iji họrọ ndị ahịa bido taa, yana nnweta maka ndị ahịa niile ma emechaa ọnwa a. Enwere ike ịzụta isiokwu ọhụụ na Ahịa Okwu, yana ọnụ ahịa sitere na $ 145 ruo $ 235; na mgbakwunye, a na-enwe usoro asaa nke isiokwu anaghị akwụ ụgwọ.
Ngosipụta: Anyị bụ mmekọ BigCommerce.
Tags: BigCommerceisiokwu bigcommercee-azụmahịa gburugburuecommerce gburugburupixel n'otu